musha United Kingdom Singers Lewis Capaldi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara Yemunhu weScotland ane mukurumbira “Mudiwa wemuAmerica".
Yedu Lewis Capaldi Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezwi rake rerwiyo rakabata moyo mizhinji pasi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Lewis Capaldi's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, titange.
Lewis Capaldi Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure.
Kutanga kubva, Lewis Marc Capaldi akazvarwa pazuva re7th raGumiguru 1996 muPort guta reGlasgow, Scotland.
Muimbi weScotland-munyori wenziyo akazvarwa semudiki pavana vana kuvabereki vake, baba vake Maka, uye amai Carol Capaldi.
Kunyangwe vazhinji vateveri vachifunga kuti Lewis Capaldi ane chete yeScotland Mhuri Chibviro. Chokwadi ndechekuti, iye zvakare ane midzi yemhuri yeItaly nekutenda kune mumwe wevabereki vake.
Lewis Capaldi akarererwa mumhuri yepakati-yemhuri kumashure kweavhareji mari inowana vabereki. Vabereki vake, kutanga nababa vake aive mutengesi wehove apo mai vake, mukoti.
Pamwe chete, vese vabereki vakashandisa yavo yepakati-kiredhi mari kuchengeta vana vavo. Lewis Capaldi akakurira mwana anofara pasi pekudzidziswa kwevabereki vake vanomutsigira.
Lewis Capaldi Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Hupenyu hwepakutanga hwaLewis Capaldi akamuona aine zuva nechaakatemerwa. Pazera diki re2, Lewis mudiki anga ave kutodzidziswa maitiro ekuridza ngoma uye gitare.
Mwana anonakidza akabva awana kuda kwake mimhanzi pazera re4 paakatanga kuita kwake pamusasa wezororo.
Kuve nevabereki vanotsigira, zvaive nyore kuna Lewis mudiki kuti asazombowana hwaro kana achiridza ngoma zuva rese.
Kusiyana nevakoma nevanin'ina vake, iye wekupedzisira akazvarwa mwana (mucheche wemba) akapfuura nepachikoro chake asingatarise zvakanyanya kuvadzidzi.
Zvakaitwa naLewis achiri kuchikoro: Ndichiri kuchikoro, Lewis aive asiri wepachikoro chakakomba maererano nekuzvipira kwake kumabhuku ake.
Kuchikoro, aiita zvakanyanya semuseki uyo dzimwe nguva aigona kusekesa vaaidzidza navo nema pranks uye meteki skits.
Akanga ari mudzidzi aifarira kushandisa yake yemahara nguva uye mabhureki kuridza zviridzwa zvemumhanzi pane kupa nguva kuzvidzidzo.
Kutora chaaida saJobho: Ari kure nechikoro, Lewis akapedza makore ake ekuumba achinyora matraki epakutanga uye achiridza gitare.
Panguva yaakange ari 11, kuda kwake mimhanzi uye kurota kuve nemitambo yepamoyo zvakamuona achitora mimhanzi yake yekuzvivara sebasa rake.
Lewis Capaldi Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Achienderera kumberi, Lewis akatora chero mukana waaive nawo wekuwana mukurumbira kunyangwe zvichireva kusanganisa dzimwe nziyo dzezvikwata izvo zvaakaita nemazvo kuvaraidza vateveri vake vashoma.
Akafambisa nzira yake achitamba munzvimbo dzakasiyana dzakapoteredza Bathgate, Glasgow, uye Edinburgh, achingoita izvo zvaaiziva kuita zvakanyanya.
Pazera remakore gumi nemanomwe, Lewis anga atozvipira hupenyu hwake kumimhanzi, achisiya dzidzo yake muchiitiko ichi.
Achikwenenzvera achikwira kumusoro, akatanga kugadzira kazhinji mimhanzi manzwi manotsi aine yake iPhone mune yake yekurara.
Mushure mekugadzirwa kwega kwega, aizozoita uploads kuakaundi yake SoundCloud.
Waizviziva here?… Yakanga iri kuburikidza neSautiCloud papuratifomu iyo Lewis capaldi akawanikwa nemaneja wake Ryan Walter.
Lewis Capaldi Bio - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kuchinja kwaLewis Capaldi mumhanzi basa kwakauya paakaburitsa rwiyo Bruises musi waKurume 31, 2017.
Izvi zvakamuona achiva iye anokurumidza kusaina muimbi kuti asvike kota mamirioni anotamba paSpotify. Iyo track yakaenderera kuva nemitambo inodarika mamirioni makumi maviri nesere papuratifomu.
Kubudirira kweBruises kwakavezwa siginecha yake neVirgin EMI Records uye Capitol Records. Mukuda kwake kuwana nzvimbo dzakakwirira, Lewis Capaldi haana kumbodzokera shure.
Akaburitsa rake rekutanga akawedzera mutambo wekurekodha "Bloom" musi wa20 Gumiguru 2017. Panguva ino, aiziva kuti achazove nemukurumbira.
Lewis Capaldi Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Lewis akavhura 2019 neyekufambira mberi kwake asina kuroorwa "Mumwe Munhu Wawaida" iyo inoratidzira mune dzinopfuura nyika dze29 kutenderera pasirese ichiva mukurumbira muEurope yose, Asia, uye Australia.
Rwiyo rwakapedza masvondo manomwe senhamba yekutanga kuUK Singles Chart ichirova zvinopfuura mamirioni makumi matanhatu nemasere ekuona paYouTube
Lewis akasimbisa chinzvimbo chake seimwe yeanonyanya kusimukira mumhanzi nyeredzi pasi rese nekuburitswa kwenyaya yedamba rake "Vamwari Vakasarudzika kuHero yeGehena”Musi waMay 17, 2019.
Iyo albham yakave yakanyanya kutengesa albhu muUK. Iyo albhu yakawanawo chinzvimbo chegoridhe muUK vhiki mbiri chete mushure mekuburitswa.
Nekukurumidza kumberi kusvika nhasi, Lewis Capaldi panguva yekunyora akaita nhoroondo nekuve iye wekutanga-akambove muimbi mune yepasirese mimhanzi nhoroondo kune vese kuzivisa nekutengesa kunze nhandare kushanya kusati kwaburitswa dambarefu rake.
Zvinoshamisa kushamisika kwekuti basa raLewis Capaldi rakakurumidza sei kukura uye kuwana kutarisirwa pasi rose. Vamwe vese, sekutaura kwedu, yave nhoroondo.
Lewis Capaldi Hukama Hupenyu:
Nekusimuka kwake kumukurumbira, vateveri vazhinji vanofanirwa kuve vakafungisisa kana Lewis Capaldi aine musikana kana iye achiroora chaizvo, zvichireva kana aine mukadzi.
Pamberi penyanzvi yemimhanzi yakabudirira, kwaimbove nemusikana anonakidza. Imwe nguva yapfuura, Lewis aive nerudo akabatana naPaige Turley.
Lewis Capaldi nemusikana wake aimbova musikana Paige vakatanga kufambidzana vachiri kukoreji kuMotherwell, Scotland.
Paige Turley kunge mukomana wake zvakare muimbi. Akamboita mu pop band inonzi G-Side. Paige zvakare aive nekuravira kwake kwemukurumbira paakazviratidza paBritain's Got Talent muna 2012.
Waizviziva here?… Paige aingova nemakore gumi nematanhatu paakaongorora chirongwa chakakurumbira chaakafadza vatongi.
Zvinosuruvarisa, mushure memamwe makore ekuve pamwe chete, ivo duo pakupedzisira vakasiya kubatana kwavo muna 2017. Maererano Zuva reScotland, aive Paige akafuridzira nhamba yaLewis Capaldi yakarova single "Mumwe Munhu Wawaida". Mumashoko emanzwiro aLewis;
“Kwakave neakafirwa mumhuri yangu uye ini ndaida kunyora rwiyo runogona kushanda kune ese hukama kuguma uye kufirwa. Ini ndaida kunyora rwiyo pamusoro pekurasikirwa uye nemanzwiro ekurasikirwa nemumwe munhu izvo zvaisanyanya kureva hukama.
Lewis Capaldi Hupenyu hwemhuri:
Muchikamu chino, tinokupa imwe nzwisiso yenhengo dzemhuri yaLewis Capaldi kutanga kubva kuvabereki vake.
Zvizhinji nezve Lewis Capaldi Vabereki:
Sezvambotaurwa, baba vaLewis Capaldi mubati wehove uye amai vake mukoti. Ivo vaviri vaive mhando yevabereki vaisatenda mukumanikidza mabasa avo kuvana vavo. Pane kudaro, ivo vanovatendera kuti vagadzire avo vega ebasa zvikamu.
Nhasi, baba vaLewis Capaldi naamai- Mako naCarol parizvino vari kunakirwa nezvakanaka zvese zvekuita kuti vagadzire yavo yemhuri chikamu kurusununguko rwemari.
Zvimwe nezva Lewis Kapaldi Siblings:
Sezvambotaurwa, Lewis Capaldi ane vakoma vaviri uye mukoma. Mumwe wevakoma vake vakuru anonzi Warren Capaldi arimowo mubhizinesi rezvemimhanzi.
Mutambo waWarren Capaldi wemimhanzi wakatsanangurwa sewakanyanya kufanana nemukoma wake Lewis.
Panguva yekunyora, Warren anonyora mimhanzi yake uye atora nhanho kumashure kubva pakuimba pachena. Vhidhiyo yaWarren Capaldi yekupedzisira pane yake YouTube chiteshi yakaiswa kumashure muna Kubvumbi 2015.
Lewis Capaldi Cousin Wechipiri Peter:
Peter Capaldi muzukuru wechipiri wababa vaLewis. Waizviziva here?… Peter aive mutambi muchirongwa chakakurumbira cheBBC science fiction terevhizheni "Doctor Who Series".
Peter Capaldi akave nemukurumbira wekutamba chegumi nevaviri mumuviri wechiremba Iye, pamwe nekupa nyeredzi muBritish's The Thick of It uye mafirimu ePaddington.
Lewis Capaldi Hupenyu hweMunhu:
Kusvika pakuziva Lewis Capaldi Hupenyu hweMunhu kunokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wake. Kutanga kuenda, Iye mumwe munhu anogara akagadzirira kuita chero chinhu kudzivisa kupokana pakati pevezera rake.
Lewis anozivikanwa nekuva murunyararo uye anoda kuve nevateveri vake vakamukomberedza vasingaratidze chero ego. Hupenyu hwaLewis Capaldi Hupenyu hwega hunogona kuteedzerwa kuRibra Zodiac Trait.
Zvakare pahupenyu hwake hwega kure nekuimba, Lewis Capaldi ane hunhu hwekupa hwakavakirwa mukati make. Iye anowanzo kukweverwa kuzvirongwa zveNGOO zvinotarisana nekupa kwomuviri.
Lewis akaita basa rakakura muSave9Lives Project yakagadzwa naJim Lynskey nechinangwa chekusimudzira kuziva nezvekukosha kwekupa nhengo.
Waizviziva here? ... Mharidzo iri mu "Mumwe Waunoda" vhidhiyo yaive chikamu chekuyedza kwaLewis kusimudzira sangano remupiro wenhengo "Rarama Upenyu Ipa Hupenyu".
Yetatu pahupenyu hwaLewis Capaldi, muimbi weScotland-munyori wenziyo anoda pfungwa yekumwe kusangana nehupenyu hwemugariwo zvake. Akambo fadza vateveri nekuenda muchivande kuti vanoshanda mubheka raGreggs.
Lewis aipfeka yunifomu yakazara yaGreggs, kusanganisira bvudzi rebvudzi apo aizviti ari pane zvakasungirirwa mumaindasitiri.
Vashandi vebheka vechingwa vakanzwa kudzikatidzwa vachiona munhu anozvininipisa werudzi rwake achigadzirira kudya kwemangwanani, kofi uye sandwichi.
Chekupedzisira, pahupenyu hwaLewis Capaldi, iye munhu anosetsa kunyangwe 'makomendi' asiri basa rake. Lewis ane hobho yekugovana zvinosekesa zvinyorwa pasocial media, kunyanya pa Twitter ne Instagram.
Lewis Capaldi Mararamiro:
Lewis Capaldi ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora gumi emamiriyoni. Akasvika pamumbure uyu wakakosha panguva iyo avo vekusarudza "Mumwe Munhu Wawaida" akasvika panhamba yekutanga muUK Singles Chart.
Kunyangwe iri rakakura mumbure, Lewis Capaldi mushonga wehupenyu hunodhura. Izvi zviri kuitika munyika umo vaimbi vasingaonekwe vasina mota dzinopenya uye ivo vachiratidza dzimba dzavo hombe.
Senge panguva yekunyora, Lewis Capaldi haasati abuda kunze kwevabereki vake kunyangwe hazvo achizadza murwi wemari.
Nei zvakadaro?… Imhaka yekuti muimbi weScotland anoti ane chimwe chinhu chakakosha kushandisa mari yake.
Lewis Capaldi Untold Chokwadi:
Lewis Capaldi akarererwa mumhuri yevaKristu. Izvi zvinoreva kuti iye muKristu nechitendero. Kurarama hupenyu hwemutendi uye akambonzi kune imwe yenziyo dzake dzakanzi 'Nyasha'.
Nekudaro, panguva yekunyora, Lewis, zvakasiyana Kanye West, haina kuzvipira zvizere kuchiKristu chikonzero.
Senge panguva yekunyora, Lewis haatende mune iyo Tatenda tsika zvichireva iye haina inki. Kunyange zvakadaro, ane vateveri vanoverengeka vane maatatoo ake pamuviri wavo.
Mushure mekutsvaga kwakadzama, tinoona kuti muimbi weScotland haaputi. Kunyangwe Lewis achinwa nguva nenguva.
Pamusoro peZita rake reNick Zita reAmerica Mudiwa:
Lewis Capaldi zita remadunhurirwa rakauya mushure megig, nguva apo vateveri vakatanga kuchema cheAmerican Sweetheart nekuita mavhidhiyo nekumumaka.
Thanks for reading naLewwis Kapaldi Nyaya Yehucheche pamwe isingachinji Biography Chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!